Nahazo kamiao mpitaona fako vaovao ny Kaominin’ny Mahajanga, ny faran’ny volana janoary lasa teo.
Version française sur https://www.booknewsmada.com/camion-assainissement-commune-urbaine-mahajanga/
Kamiao ho an’ny Kaominin’ny Mahajanga
Nahazo kamiao mpitaona fako vaovao ny Kaominin’ny Mahajanga, ny faran’ny volana janoary lasa teo. Kamiao izay hanamora ny fivezivezena amin’ny fitaomana fako eo anivon’ny Kaominina, izay sahirana amin’ny fitaterana ireo fako ara-potoana noho ny tsy fahampian’ny fitaovana.
Isan’andro dia manodidina ny 30 taonina eo ny lanjan’ny fako voaangona ao amin’ny tanànan’ny Mahajanga. Amin’ny fotoana maha be voankazo sy maha be mpizahantany dia mahatratra hatramin’ny 40-45 taonina izany. Volana vitsivitsy izay no nanombohan’ny Ben’ny tanànan’ny Kaominin’ny Mahajanga Mokhtar Andriantomanga ny hetsika fanangonana fako isan-kerinandro, izay iaraha-miasa amin’ny mponina ao an-toerana. Izany dia entina indrindra ihany koa hanovana ny fihetsiky ny tsirairay sy hahatonga azy handray andraikitra.[amazon_link asins=’B073TYF4KT’ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’d0fad107-0b69-11e8-a960-a96a8098189b’]
Ity kamiao ity dia natolotry ny orinasa Star, Telma ary Imperial Tobacco, ho famaliana ny fangatahan’ny Kaominina sy ho fanampiana azy ireo amin’ny hetsika fanadiovana ny tanàna.
Fanampian’ny Star, Telma ary Imperial Tobacco
Miisa 244 000 ny mponin’ny Mahajanga amin’izao fotoana izao. Anisan’ny toerana be mpitsidika indrindra sy mandray mpizahantany be indrindra eto Madagasikara izy isan-taona.
Ny orinasa Star dia manokana vola ho an’ny asa sosialy eto amin’ny Nosy, isan-taona. Misahana sehatra efatra izany: ny fahasalamana, ny sosialy, ny fampiarana ary ny tontolo iainana. Ny fanolorana io kamiao io dia hetsika azo tsapain-tanana ho fampivoarana ny fiainan’ny mponina ao an-toerana, sy ho fanamafisana ny fitohizan’ny fahadiovana.
Ny orinasa sosialy Imperial Tobacco kosa dia miara-miasa amin’ny tanànan’ny Mahajanga amin’ny alalan’ny Soctam/Sitam, izay manampy ny faritany amin’ny alalan’ny famokarana vokatra avy amin’ny Madacompost. Amin’ny alalan’ity fanolorana kamiao ity dia manampy amin’ny fanadiovana ny tanàna sy ny fiafiana amin’ny firongatry ny aretina pesta koa izy ireo.
Ny orinasa Telma ihany koa dia mpiara-miasa akaiky amin’ny Kaominina ary maneho hatrany ny fahavononany hanampy eo amin’ny lafiny sosialy, amin’ny alalan’ny fanampiana amin’ny fanadiovana ny tanàna.